Football Khabar » ला लिगामा आज रियल मड्रिड र बार्सिलोनाको खेल हुँदै : को चढ्ला शीर्ष स्थानमा ?
ला लिगामा आज रियल मड्रिड र बार्सिलोनाको खेल हुँदै : को चढ्ला शीर्ष स्थानमा ?
स्पेनको घरेलु लिग ला लिगामा आज केही महत्त्वपूर्ण खेलहरू हुँदैछन् । जसमा आज प्रमुख उपाधि दाबेदार मानिएका बार्सिलोना र रियल मड्रिडले आ–आफ्नो खेल खेल्दैछन् । त्यस्तै, आज भ्यालेन्सिया र ग्रानाडाको खेल पनि हुँदैछ ।
लिगमा हाल १३ खेल खेलेको रियल सोसिडाड २३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । समान ११ खेल खेलेका बार्सिलोना र रियल मड्रिड समान २२ अंकसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । १२ खेल खेलेको एथ्लेटिको मड्रिड २१ अंकसहित चौथो स्थानमा छ ।
आजको खेलमा सबैभन्दा दबाबमा बार्सिलोना हुनेछ । किनभने, चार दिनअघि युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत समूह चरणको चौथो खेल आफ्नो घरमा खेल्दा गोलरहित बराबरी खेलेको बार्सिलोना आज पनि आफ्नै घरमा उत्रिँदैछ । स्लाभियासँगको सो खेलपछि बार्सिलोनाले कमजोर प्रदर्शन गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
आज लगत्तै दोस्रो होम म्याचमा उत्रिँदा बार्सिलोनामाथि चर्को दबाब हुनेछ । आज बार्सिलोना सेल्टामाथि भिगोमाथि सहज जित निकालेर आफ्नो आलोचना कम गर्न चाहन्छ । आज घरेलु मैदानमा उत्रिँदा यसअघि चोटका कारण टोलीमा नरहेका लुइस स्वारेज पनि मैदान फर्किंदैछन् । अन्य स्टार खेलाडीहरू सबै टोेलीमा उपलब्ध छन् ।
यता, आज रियल मड्रिड भने अवे मैदानमा एइबारसँग भिड्दैछ । पछिल्लोपटक च्याम्पियन्स लिगमा गालातासरेलाई ६–० ले हराएको रियल आज उच्च मनोबलका साथ अवे मैदानमा उत्रिँदा ऊ अर्को सहज जितको खोजीमा हुनेछ । एइबार हाल १५ अंकसहित लिगको १४औं स्थानमा छ ।
नेपाली समयअनुसार आजका खेल :
अलाभेस भर्सेस भाल्लाडोलिड – साँझ ५ः४५ बजे
भ्यालेन्सिया भर्सेस ग्रानाडा – राति ८ः४५ बजे
एइबार भर्सेस रियल मड्रिड – राति ११ः१५ बजे
बार्सिलोना भर्सेस सेल्टा भिगो – राति १ः४५ बजे
प्रकाशित मिति २३ कार्तिक २०७६, शनिबार ११:००